ပျောက်ဆုံးသွားသောပုရွက်ဆိပ်စာတမ်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on November 1, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo	Posted in AntsTagged ကျမ်းမြတ်ကုရအန်, ပုရွက်ဆိပ် ဘုရင်မကြီး, ပုရွက်ဆိပ်စာတမ်း, သုတေသန စာတမ်း, ကျော်ကျော်ဦး, ပျောက်ဆုံးသွားသော, Burmese Muslims, Hills afre alive with sound of ants talking to each other, islam, Myanmar Muslims, religion
လွန်ခဲ့တဲ့လက အမှတ်မထင် သုတေသန စာတမ်း ဆောင်းပါးတခု ဖတ်မိတယ်။
“တောင်ကုန်းများသည်ပုရွက်ဆိပ်တို့၏ စကားသံများ ဖြင့် ဆူညံနေလေ၏ ” အမည်ရတဲ့
ဆောင်းပါး ပါ။ ဒီ စာတမ်းအဆိုအရ ပုရွက်ဆိတ်တို့သည် အခြင်းခြင်း စကား
ပြောကြသည့် အပြင်၊ ပုရွက်ဆိပ် ဘုရင်မကြီးရဲ့ အမိန့်စကားကို လိုက်နာကြကြောင်း
သုတေသန ပြုလုပ်မှူများအရ သိရတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဖော်ပြတဲ့ သတင်းစာက ယူကေ တိုင်းမ် သတင်းစာကြီးဖြစ်ပါတယ်။
အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် က ပရောဖက်ဆာ ဂျယ်ရမီ သောမတ် နဲ့ အဖွဲ့က
ပုရွက်ဆိပ် အုံ အထဲကို သာမန်လူသားတို့ မကြားနိုင်တဲ့ အသံအောက် အသံလှိုင်းကိုဖမ်းယူ နိုင်တဲ့
မိုက်ကရိုဖုန်း အငယ်စားလေးကို ထဲ့သွင်းပြီး အသံဖမ်းယူပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း အတန်ကြာ ကတည်းက ပုရွက်ဆိပ် များဟာ အသံနဲ့အဆက်
အသွယ်ပြုကြတယ်လို့ သိကြပေ မဲ့ စကားပြောတတ်တယ်လို့ မယုံကြည်ခဲ့ပါ။
ဆက်သွယ်မှူပြုရန် ဝမ်းပိုက်ကို လက်ချောင်းများနှင့် ပွတ်တိုက်ရာမှ
ဒီစမ်းသပ်မှူက ပုရွက်ဆိပ်ဘုရင်မကြီးဟာပုရွက်ဆိပ် စစ်သားများကို စစ်တိုက်ဖို့အသံနဲ့
အမိန့်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပညာရှင်များဟာသူတို့ အသံဖမ်းယူ ထားတဲ့ စစ်ထွက်အမိန့်ကို
အသံလွှင့်စက် မှပရွက်ဆိပ်အုံထဲ ပြန်လွှင့်ပြီး စောင့်ကြည့် တဲ့အခါ ပုရွက်ဆိပ် စစ်သားများဟာ
သူတို့ရဲ့ မေးရိုးများကို ဟ ပြီး တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်အနေအထား နဲ့ နာရီပေါင်းများ စွာ နေတာ
ဒီထက် ပိုအံ့အားသင့်စရာတွေ့ရှိချက် ကတော့ “အပြာရောင်သူပုန်” လို့အမည်ရတဲ့ လိပ်ပြာတွေရဲ့
ပိုးတုံးလုံး လေးတွေ ကို ပုရွက်ဆိပ်တွေရဲ့ပြူစုစောင့်ရှောက်မှူပါ။ ဒီပိုးတုံးလုံးလေးတွေက ပုရွက်ဆိပ်
ငယ်လေးတွေ က အစာတောင်းတဲ့ အသံကို ပြူလုပ်နိုင်ကြ ပြီး ပုရွက်ဆိပ်တွေက မိမိ တို့ရင်သွေးငယ်
တွေကို အစာ ကြွေးသလို ပိုးတုံးလုံး လေးတွေအသံပြုတိုင်း အစာကြွေး တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါထက်ပို အံ့အားသင့် စရာ ကတော့ မူရင်း အင်တာနက်လိပ်စာ လင့်
မှာရှိ တဲ့ မူရင်းစာတမ်းဟာ စုပ်စမြုပ် ပျောက် ဆုံး နေခြင်းပါ။
ဒီစာတမ်းပါပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မွတ်စလင်ဝက်ဆိုက်များက တမန်တော်စူလိုင်မန်
နဲ့ ပုရွက်ဆိပ်နဲ့စကားပြောတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ အာယတ်တော် များကို
အံ့ခမန်း ထောက်ပြနေတဲ့ သုတေသန အဖြစ်ရေးသား ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် တစ်ရံရောအခါ ထိုဗိုလ်ခြေတို့သည် ပုရွက်ဆိတ်များရှိကြသောချောင်းလျှိုရိုး
သို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသော် ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်က အို-ပရွက်ဆိတ် အပေါင်းတို့၊စုလိုင်မာန်နှင့်
တကွ ထို စုလိုင်မာန်၏ဗိုလ်ခြေတို့သည် အသင်တို့အား မသိမမြင်ကြဘဲ (မတော်တဆ)
ဖိကြိတ်တက်နင်း ချေမှုန်းမပစ်မိကြရန် အသင်တို့သည် မိမိတို့၏တွင်းများထဲသို့
ထိုအခါ စုလိုင်မာန်သည် ထိုပရွက်ဆိတ်၏စကားကြောင့် ပြုံးရယ်ခဲ့လေ၏။
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်အဂ်လိပ် ဘာသာပြန်မှာ ထိုအမိန့်ပေးသော ပုရွက်ဆိပ်ကို
ပုရွက်ဆိပ် အမ အဖြစ် ဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ ရလို့
ကျမ်းမြတ်ကုရအန် က ပုရွက်ဆိပ် ဘုရင်မကိုဆိုလိုကြာင်းပိုပြီး
(18) So he smiled, amused at her speech; and he said: “O my Lord! so order me
that I may be grateful for Thy favours which Thou hast bestowed on me and on my parents
and that I may work the righteousness that will please Thee: and admit me
by Thy Grace, to the ranks of Thy righteous Servants.”
“ He smiled, amused at her speech”
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Post တခုရေးခဲ့ပါတယ်။
မှာ လူသားများရဲ့ လက်ရှိအသိညဏ် နဲ့ ရှင်းလို့ မရတဲ့အဖြစ် ( Miracles)
များကို ပုရွက်ဆိပ်မျိုးနွယ်လို့အမည်ရတဲ့ လူမျိုးစုလို့ ဘာသာပြန်တာမျိုး
ဟာ မှားယွင်းပါတယ်၊ ကျမ်းမြတ်ကုရအန် မှာ ပုရွက်ဆိပ် ဖြစ်တဲ့အပြင်
Gender အမ လို့ပါဖော်ပြထားပါတယ်။
လူ့ညဏ်နဲ့ဆွဲတွေးလို့ရအောင် ပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် ဖန်ဆင်းရှင်ပေးတဲ့အသိတရားနဲ့
လုံးဝလွဲမှားနိုင်လို့ ကျမ်းမြတ်ကုရအန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကိုအဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေနဲ့
ပညာရှင်များ စုပေါင်းပြီး ပြန်ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ်တည်းဖြတ်ပြီးမှ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးသင့်ကြောင်းပါ။
အင်တာနက်ခတ်ကြီးမှာ သူ့ကိုတီထွင်သူတွေကပဲ သူတို့သွားစေချင်တဲ့လမ်းကို ပုံဖော်ပါတယ်။
အများစုဟာ ဘာသာရေးကိုယုံကြည်မှူ မရှိတဲ့ ရုပ်ဝါဒီတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ဝါဒီတွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာ
ဒီလောက အတွင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားရှိရင် ဖျောတ်ဖျက်
ပစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ ကအမှူမဲ့အမှတ်မဲ့ တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ က ဖန်ဆင်းရှင်ရှိကြောင်း
လူတွေကို သက်သေပြရင် ရှင်းပစ်တတ်တဲ့အကြောင်းပါ။
မူရင်းကနေကူးထားတဲ့ post တခုတွေ့လို့ ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Hills are alive with the sound of ants — talking to each other
Sunday, 07 June 2009 00:50
PoorBest “Till, when they came to the valley of the ants, one of the ants said: ‘O ants! enter Your dwellings, lest Sulaimân (Solomon) and his hosts crush you, while they perceive not.’ So He [Sulaimân (Solomon)] smiled, amused at her speech.” (An-Naml: 18-19) from the Koran
The Holy Qu’ran is always in complete agreement with the scientific finidings.This proves that it reaaly revealed from Allah( God).
A report in the science magazine says” Advances in audio technology have enabled scientists to discover that ants routinely talk to each other in their nests.
Most ants haveanatural washboard and plectrum built into their abdomens that they can rub together to communicate using sound.
Using miniaturised microphones and speakers that can be inserted unobtrusively into nests, researchers established that the queens can issue instructions to their workers.
Rebel’s large blue butterfly is one of about 10,000 creatures that haveaparasitic relationship with ants and has now been found to have learnt to imitate the sounds as well as using chemical signals.
The butterfly’s caterpillars are carried by ants into the nests where they beg for food and are fed by the workers. Whenacolony is disturbed the ants will rescue the caterpillars before their own broods.
“When we played the queen sounds they did ‘en garde’ behaviour. They would stand motionless with their antennae held out and their jaws apart for hours – the moment anyone goes near they will attack,” he said.
“The most important discovery is that within the ant colony different sounds can provoke different reactions,” he said. “I would be very surprised if we didn’t get different types of sound.
“It’s within the power of the ant to play different tunes by changing the rhythm with which they rub.”
He added that the detection of the role of sounds provided the “final piece of the jigsaw” to explain how Rebel’s large blue caterpillars survive in ants’ nests and should help to guide conservationists in trying to save the endangered European mountain species.
The findings were reported in the journal Science
One thought on “ပျောက်ဆုံးသွားသောပုရွက်ဆိပ်စာတမ်း”
Pingback: ကျမ်းမြတ်ကုရအန်၏ဆင်ကဏ္ဌ သက်သေ « Kyaw Kyaw Oo's Words Of Love
Dua supplication to be made at the age of forty
Islamic Fashion Festival returns to Kuala Lumpur